Belarus maka nwa amaala Belarus - 1aviagem.com
Na post gara aga: Ajụjụ ọnụ: Kedu ka Canada si dị? nke onye Canada
Nkwupụta ọzọ: Ajụjụ ọnụ a Hungary - Aro maka Hungary, Australia na Brazil.
Edebere 3 November 2018 site Römulo Lucena
Ndewo onye obula, ya mere, ka anyi kwuo okwu banyere Belarus taa. Iji mee nke a, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịjụ nwa amaala Belarus ajụjụ ọnụ. Nke ahụ bụ mgbe mụ na enyi m hụrụ n'anya bụ Kate na-akparịta ụka a. Anyị zutere mgbe m mere njem mbụ ahụ. Minsk nọ na-eleta na ọ bụ obodo ndu n'ihi na a tour na anyị nnọọ aka a ọtụtụ aga n'ime obodo, akụta nri ụgbọ ala ma na-amapụ na ziri ezi na-akwụsị na-egosi n'ebe ụfọdụ, na ọbụna na-aza ajụjụ banyere ihe dị iche iche nke Belarus. Anyị na-amalite ọbụbụenyi anyị n'ebe ahụ, nke na-anọgide na-adịgide adịgide taa. Ọbụna o zigara m pinụ mara mma, nke Belarusian ọkọlọtọ, nke kachasị ọhụrụ na nchịkọta ahụ, mana ọ bụ ya bụ okenye, ebe ọ nwere ike inwe karịa 30 afọ, ma ọ bụ na nso nso a ka agbakwunyere nchịkọta ya, ya mere ọ bụ okenye na nwata n'otu oge ahụ. 😄 N'ezie m na-akwụghachi ndị obiọma site eziga a onyinye maka ya ebe a na Brazil na nke ahụ bụ otú anyị na-eche na post office ọrụ na na-arụsi ọrụ ike. LOL (na-achịkwa ọnụ) 😂. Ya mere, ka anyi ga amalite?
Dị ka ọ dị na mbụ na blog a, a ga-agbanwe agba nke amaokwu dị na ya. Kat ga-acha ọbara ọbara ma m ga-abụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ka anyị malite.
a. Kate, ebee ka amụrụ gị? Ebeekwa ka ị na-ebi taa?
- A mụrụ m na Mogilev (onye nke isii n'ógbè Belarus, 180 km si isi obodo - Minsk). Ma mgbe ahụ, m kwagara Minsk na-amụ gọọmenti etiti asụsụ University of Minsk, mgbe ahụ, nọgidere n'ebe ahụ na-arụ ọrụ (dị ka na isi obodo naanị i nwere ike na-akpata ego na-adị ndụ ...) ugbu a, m lụrụ otu Grodno nwata (onye nke isii kasị obodo Belarus bụ: Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno, Mogilev na Minsk). A na-esikwa n'obodo ya kwaga obodo m maka ọmụmụ ihe wee nọrọzie maka ọrụ ahụ. Anyị bi ugbu a n'otu ụlọ dị na Minsk, 40 kilomita si n'ebe ahụ. Echere m na nke a bụ nhọrọ kachasị mma anyị nwere ike ịhọrọ!
Ka ọ dị ugbu a, site na paspọtụ, agakwaghị m Katsia ... ma Katherine. =)
b. Kedu ọrụ gị ugbu a?
- Dị ka ị maara, tupu m trEnwetara m ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nlegharị anya na ngalaba nnyefe ma were ọrụ nke ndị mba ọzọ na-abịa Minsk iji chọpụta obodo a na Belarus n'ozuzu. Anọ m arụ ọrụ n'ebe ahụ maka afọ 4 ma ugbu a, m na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ Ọstrịa, ịbụ onye nnọchianya ha, ọ dịghịkwa mkpa ịga ụlọ ọrụ kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ maka 300 $ kwa ọnwa. Enwere m ike ịrụ ọrụ site na ụlọ m na-achọ maka ọrụ na ahịa dị ukwuu, mana nke ahụ abụghị iwu - ọ bụ ihe ọzọ. Enwere m obi uto na ụlọ ọrụ a chọtara m ma chọọ ka m rụọ ọrụ iji mee ka ihe gbanwere.
c- Gini bu ihe kacha mma gi na Belarus?
- Enwere m mmasị na Belarus n'ihi na ọ bụ mba mara mma na nke udo. Na anyị bụ ndị na n'etiti Europe, dị ka ọ na-ekwu na akwụkwọ nile na Belarus na ọ bụ eziokwu - gbara anyị gburugburu Poland, Lithuania, Russia, Ukraine, ihe atụ - m - Vilnius (isi obodo nke Lithuania) bụ nso karịa obodo m na m na-aga ebe ahụ kwa izu. Ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụ, ọ na-eme ka m dị ka akụkụ nke Europe. (N'ezie, mgbe niile nyochaa na ókèala, nke anaghị atọ ụtọ).
d - Gini ka i ga-agbanwe ma oburu na i nwere ike?
- Na obodo a, amachibidoro ịza ajụjụ ndị a. Ọ bụrụ na ị maara ihe m na-ekwu.
- Ọfọn, gịnị gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Maka Belarus ọ ka mma ịghọ onye nweere onwe ya na Soviet Union? Kedu ka ochichi onye kwuo uche ya?
"Ya mere, site na aha na akụkọ ihe mere eme, anyị nwere onwe anyị." The Republic of Belarus kemgbe 1994 (na ebe ọ bụ na mgbe ahụ anyị nwere nanị otu president), ma fọrọ anyị na ike njikọ na Russia, anyị ji ha a otutu ego (n'ezie, anyị = anyị president) na ee, anyị na-a kwuo uche-mba na na anyi ekwugh ihe obula onye isi oche anyi ga - acho inu ... M ga ekwu na o bu ihe eze! (I.e.
N'ezie, n'usoro ochichi, anyị nwere akara ebe e kwuru na a gaghị enwe ike ịhọpụta president karịa oge ụfọdụ. Ma onyeisi oche anyị ehichapụchara akara a ma nọgide na-abụ naanị ya! Ikekwe nke a bụ azịza banyere ọchịchị onye kwuo uche anyị.
- Iah ... I can not complain about Brazil ...
f- Ma i chere na nnwere onwe emeela ka ndụ ụmụ amaala mma?
- Ụmụ amaala adịghị eche na nnwere onwe a, ọ dị mwute ikwu, na ole na ole ndị bi na isi obodo nwere ike ịhapụ onwe ha ka ha gaa ebe - iji dịrịkwuo mma. Ma dịka obodo ndị ọzọ fọdụrụ, ọnọdụ ahụ adịghị mma, ndị mmadụ dara ogbenye, ha na-aṅụ ihe dị ukwuu, ha agatụbeghị mba ọzọ ma ha apụghị ọbụna ịkwụ ụgwọ visa ịga Lithuania, nke dị nnọọ nso.
g - Ọ bụ n'asụsụ Belarus yiri Russian? Ma ọ bụ onye maara otú e si asụ Russian nwere ike ọ gaghị enwe ike ịsụ asụsụ Belarus?
- Anyị nwere asụsụ mba abụọ - Russian na Belarusian. Ma ọtụtụ ndị na-asụ Russian, ọtụtụ ndị amaghị Belarusian (maọbụ m, dịka ọmụmaatụ). (I.e.
Ọ pụtara na ị nwere ike ịghọta Belarus, ma ị nweghị ike ikwu okwu n'amaghị ama n'enweghị njehie. O yiri nke Russian, ma dị iche site na ịkpọ okwu na okwu ụfọdụ dị iche iche. N'ụlọ akwụkwọ niile akwụkwọ na-dere na Russian na Belarusian bụ dị ka a abụọ asụsụ na si afọ nke anọ anyị na-amalite-amụta asụsụ na Belarusian akwụkwọ. N'ezie, na mgbe na ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ ga-ahọrọ dị ka asụsụ bụ isi, ihe mere ọbụna tupu ihe nile bụ ihe na russo.Mas anyị nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na zuru Belarusian asụsụ - e na mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ physics a na-akụzi na Belarusian. Ma nke a bụ ihe ọzọ karịa na iwu.
h- Gini ka ị ga akwado ka onye njem nleta mee ma o bu gara Belarus?
- Ọ dabere na oge ya / ya, na obodo ahụ chọrọ ịga. Mana ihe mbụ ga-abia Belarus ma ghara ikwere n'ihe niile ndị isi ụlọ ọrụ nlegharị anya gwara gị ma ọ bụ ihe ị ga-ahụ na ịntanetị, ma ọ bụ gụọ akụkọ mpaghara, n'ihi na ọ bụ naanị eziokwu ahụ ka ị ga-ahụ n'onwe gị anya.
- Lee, m masịrị ya! (Nanị eziokwu ga-abụ nke ị na-ahụ anya gị, Katherine).
"Ọ kachasị mma ịbanye site n'oge ruo n'oge iji wepụta oge iji gaa na ụlọ ngosi ihe ngosi dị iche iche, na-agagharị na obodo ma eleghị anya na-eme njem na mpaghara ọzọ nke obodo. Ọ ga-akacha mma ma ọ bụrụ na ị nwere enyi nwere ike igosi gị ihe ma ọ bụ nduzi, ọbụna na ụfọdụ ederede ederede, ọ bụghị otu. Atụla egwu Belarus - anyị nwere ezigbo ọbịa ma ugbu a, anyị nwere ọchịchị na-enweghị nnwere onwe maka ịnọru ụbọchị 30 (nke na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị bịarute ma pụọ ​​Minsk airport).
Ọ ga-amasị gị itinye ihe ọ bụla ọzọ? Obere ozi maka onye ọ bụla na-agụ blog a?
- Njem ma mee enyi na mba ọbụla ị na-aga! Ị nwere ike ịhụ onye ọ bụla ọzọ naanị otu ugboro, mana ezi ncheta ga-anọnyere gị mgbe niile!
- Na-ekwenye ekwenye!
Ọfọn, anyị bịarutere ebe a na njedebe nke ajụjụ ọzọ, site na ụzọ, tupu m gwụchaa, achọrọ m ịhapụ arịrịọ m maka ụlọ ọrụ ahụ nke goro Kat, ị nwere ike ịkwado ya! E wezụga ezigbo onye nduzi, mara ọtụtụ ihe banyere mba ahụ ma nwee ezigbo enyi, ugbu a, ọ na-enye ọnụ ahịa mba ụwa !! N'akụkụ nke ọzọ nke oké osimiri, na ntanetị njem na Brazil! Echere m na m ga-amalite mgbasa ozi: #raiseKatSalary
😄 😀 - Ọ bụ ihe obi ụtọ, ọtụtụ obi ụtọ! Daalụ maka ajụjụ ọnụ.
- Kate Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịgwa gị okwu ọzọ, Achọrọ m ka ihe kacha mma maka gị (gị na di gị) nakwa na njem ọhụrụ a jupụtara na obi ụtọ. Daalụ maka oge, ezi obi na ọchị na nyocha a! Ma ọ bụrụ na ha abịa Brasilia ama mara?
Ọ bụrụ na ị na-enweta / na-enyere gị aka (na enyemaka Google!)
Ugbu a ọ dị gị aka, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ajụjụ a, nwee obi ụtọ n'ebe ahụ, kọọrọ ya ndị enyi gị, ma soro netwọk mmekọrịta anyị.
Maka ịmatakwu ọdịnaya na njem na ajụjụ ọnụ, pịa na map ụwa anyị n'okpuru ebe a. (I.e.
Na vidiyo nke mgbe m nwetara pin.
Ajụjụ ọnụ amigos Belarus Belarusian isi obodo Ajụjụ ọnụ Minsk política presente njem mbụ weghachite viaje